उमेर भन्दैन हृदयघातले , यसरी गर्नुस मुटुको हिफाजत !! | सुदुरपश्चिम खबर
उमेर भन्दैन हृदयघातले , यसरी गर्नुस मुटुको हिफाजत !!
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : भदौ १३, २०७८ 12
शरीरभित्रको अति महत्वपूर्ण एक अंग हो मुटु । शरीरका प्रत्येक अंगमा आवश्यक रगतको आपूर्ति गर्ने काम यसले गर्छ त्यसैले यसलाई स्वस्थ राख्न आवश्यक छ । तर, अहिलेको तनावयुक्त व्यस्त जीवनशैलीका कारण मुटुरोगीहरु बढिरहेका छन् । पहिले–पहिले उमेरदार मानिसहरुलाई मात्रै हुने मुटुसम्बन्धी समस्याले अहिले युवाहरुलाई पनि आफ्नो चपेटामा पार्न थालेको छ ।
स्वस्थ रहनको लागि असल फ्याट र खराब फ्याटको अन्तरलाई सही किसिमले बुझ्नुपर्छ । ‘द अमेरिकन हार्ट एसोसिएसन’ ले स्वस्थ रहनको लागि खानपानमा खराब –स्याचुरेटेड) फ्याटलाई असल –अनस्याचुरेटेड) फ्याटले विस्थापन गर्ने सल्लाह दिएको छ । राम्रो स्वास्थ्यको लागि हामीले भोजनमा मोनो स्याचुरेटेड वा पोली स्याचुरेटेड फ्याट समावेश गर्नुपर्छ । पोली स्याचुरेटेड फ्याटले रगतमा खराब कोलस्ट्रोलको स्तरलाई कम गर्छ जसको कारण मुटुसम्बन्धी रोगहरु र स्ट्रोकको खतरा कम हुन्छ ।
ओमेगा ३ फ्याटी एसिडले शरीर सुन्निन –इन्फ्लेमेसन) कम गर्छ । इन्फ्लेमेसनको कारण रक्तनली क्षतिग्रस्त हुन्छ जसको कारण हृदयरोग वा स्ट्रोकको खतरा बढ्छ । साथै, यसले मुटुको धड्कनको उतारचढावलाई पनि नियन्त्रण गर्छ र मुटुलाई सुरक्षित राख्छ ।
मुटुरोगबाट जोगिनका लागि कम उमेरदेखि नै ध्यान पु¥याउनुपर्छ । युवावस्थामा मुटुसम्बन्धी रोग लाग्ने प्रमुख कारण धुम्रपान वा सुर्ति सेवन हो । यसलाई बन्द गर्न आवश्यक छ ।
सफ्ट ड्रिङ्क्स, प्याकेटका जुस आदिको सेवन पनि गर्न कम गर्नुहोस् । सातामा एक पटकभन्दा बढि फास्टफुड वा प्रशोधित खानेकुराहरुको सेवन नगर्नुहोस् । खानामा फलफूल र हरियो सागसब्जीको मात्रा बढाउनुहोस् ।
निष्कृय जीवनशैली, तनावपूर्ण काम, धुम्रपान, मदिरापान, चिनीयुक्त खानेकुरा र फास्टफुडको अत्याधिक सेवन यसका अन्य कारण हुन् । अनलाइनखबर बाट सभार